I-Renovables Verdes iwebhusayithi ye-Actualidad Blog ezikhethekile emandleni avuselelekayo kanye nemvelo. Siphatha ngokuphelele amandla afanelekile eplanethi bese siwaqhathanisa navamile. Siyisikhungo esikhethekile esinikeza imininingwane eyiqiniso futhi eqinile.
Ithimba lokuhlela le-Renovables Verdes lakhiwa iqembu le- ochwepheshe bamandla avuselelekayo, ahlanzekile futhi aluhlaza, phakathi kwabo kukhona abaphothule izifundo zesayensi yezemvelo. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
Uphothule iziqu zeSayensi Yezemvelo kanye ne-Master in Environmental Education e-University of Malaga. Umhlaba wamandla avuselelekayo uyakhula futhi uya ngokuya ufaneleka kakhulu ezimakethe zamandla emhlabeni jikelele. Ngifunde amakhulukhulu omagazini besayensi ngamandla avuselelekayo futhi ebangeni lami nganginezihloko eziningana ekusebenzeni kwabo. Ngaphezu kwalokho, ngiqeqeshwe kabanzi ezindabeni zokusebenzisa kabusha izinto nezemvelo, ngakho-ke lapha ungathola imininingwane engcono kakhulu ngakho.
Ukushisekela ubuchwepheshe nesayensi kwenziwe kutholakale emvelweni nasemvelweni. Uchwepheshe ekuvimbeleni ubungozi emsebenzini enkampanini kanye nochwepheshe ekuphathweni kwemvelo.
Unjiniyela wekhompyutha onothando lomnotho womhlaba, ikakhulukazi izimakethe zezezimali namandla avuselelekayo.
Ukuzibophezela emvelweni nokuthi kuyimbangela ebalulekile yokuhambisana nakho konke okwenzekayo emhlabeni nasemhlabeni wethu. Ngenhloso yokunikeza ukukhanya okuthe xaxa kulokho okusizungezile.